Xuska Maalinta Qaxootiga Adduunka oo lagu qabtay South Africa “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Xuska Maalinta Qaxootiga Adduunka oo lagu qabtay South Africa “SAWIRRO”
Munaasabad Loogu dabaal dagayay maalinta Qaxootiga adduunka loo iclaamiyay 20-ka Juun ayaa lagu qabtay deegaanka Venda oo hoos yimaada gobolka limpopop, waxaana soo qaban qaabiyay Hey’adda Qaxootiga adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loogu yeero UNHCR xarunteeda Gobolka Limpopo iyo xubno ka socday dowladda koofur Africa.
Munaasabada ayaa waxaa kasoo qeybgalay xubno kala duwan oo ka socday ururrada bulshada kuwa u dooda xaquuqda Qaxootiga mamulka dowladda ee gobolkaasi iyo waliba Jaaliyadda ku nool gobolkaasi oo ay ka mid tahay Jaaliyadda Soomaalida ee ganacsiyada ugu badan ku leh deegaanaa gobolka Limpopo .
Qaar ka mid ah xubnaha Jaaliyadda Soomaalida uga qeybgalay qudbadahii halkaasi laga jeediyay ayaa ka hadlay dhibaatooyinka Soomaalida ay kala kulmaan shacabka South Africaanka ah, gaar ahaan rabashadaha jinsi naceybka ah oo noqda kuwa aysan shacabka u kala harin xilliyada ay dhacayaan, waxaase hadalkaasi ka jawaabay oo sheegay in ay aad uga xun yihiin xubnaha dowlada South Africa uga hadlay goobtaasi.
Abdirashiid Xuuriye oo ah guddoomiyaha Jaaliyadda ee Deegaanka Vembo oo la hadlay warbaahinta Qaranka dhamaadka kulanka ayaa sheegay.
“Waxaa ay aheyd munaasabad lagu dabaal dagayay maalinta Qaxootiga adduunka waxaana soo qaban qaabiyay Hey’ada UNHCR iyo dowlada South Africa, waxaana ay si wadajir ah u sheegeen in ay aad uga xunyihiin dhibaatada loo geysto dadka ajaanibta ah ee ku nool South Africa.
Xuska munaasabadan ayaa ku soo beegmeysa xilli dalka koofur Africa sanadkan ay ka dhaceen weeraro isir naceyb ah oo saameen ku yeeshey nolosha kumanaan qaxooti ah, isla markaana sababay in ay dib ugu laabtaan dalalkii ay hore uga soo carareen waxaana lagu boobay boqolaal goobo ganacsi ah oo ay lahaayeen dadka ajaanibta ah.
By Cabdullaahi Maxamuud Amiin”
Wasiirka Gaashaandhigga oo la kulmay Saraakiisha ciidanka X.D.S, kuna booriyay adkeynta amniga “SAWIRRO”
Nicholas Kay oo soo dhaweeyay dhaarinta baarlamaanka Maamulka Gobollada dhexe